अर्थ/वाणिज्य Archives - Gaule News
गाउले न्युज, तपाईंले आफुले कमाएको पैसा कती बचत गर्नुहुन्छ ? कमाएको पैसा सबै खर्च गरेर हैरान हुनुहुन्छ ? केहीले धेरै प्रयासबाट आफूले कमाएको पैसा जोगाउन सक्छन् । तर केही व्यक्ति भने पैसा जोगाउन नसकेर हैरान नै भएका छन् । आज हामीले पैसा कसरी बचाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ । जुन कुराले तपाईंलाई सहयोग गरोस् । […]
गाउँले न्यूज, ६ असार, काठमाडौं । शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य सबै भन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मूल्य बढेसंगै सुन किन्ने ग्राहक संख्या ज्यादै घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बिहीबार प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । बुधबार […]
गाउँले न्यूज, बिराटनगर । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार […]
गाउँले न्यूज, ३० जेष्ठ, काठमाडौँ । सातवटै प्रदेशले आ-आफ्नो दोस्रो बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा गरिरहेको छ । चालु वर्षको पहिलो बजेटमार्फत केही अनुभव बटुलिसकेका प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयमा अहिले निकै व्यस्तता बढेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले […]
गाउँले न्यूज, १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । जस मध्ये सरकारले यी तीन क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा […]
१० रुपैयाँमा किन्न पाइने त्रिशुलीको शेयर खुल्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पहिलो आवेदन
गाउँले न्यूज, ७ चैत्र, काठमाण्डौ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेयरका लागि आवेदन दिएका छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले ३७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सेयर किन्न निवेदन दिएका हुन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले शेयर आवेदन भरेका हुन् ।आईपिओमा […]
मुनाफा फिर्ता लैजाने कुराको ग्यारेन्टी गर्छौ : अर्थमन्त्री
गाउँले न्यूज, ५ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरे मुनाफा फिर्ता लैजाने कुराको सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले पुँजी सुरक्षा र मुनाफालाई सुरक्षित रुपमा आफ्नो देशमा लैजाने कुराको प्रत्याभूति गर्न सरकार तयार रहेको बताए । बैठकमा उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवको तर्फबाट ‘विदेशी […]
एक कल फोनले विथोलियो बैंक अध्यक्षहरुको बैठक
गाउँले न्यूज, ९ फागुन, काठमाडौं । ब्याजदरलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले लगाएको आरोपबारे छलफल गर्न बसेको वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुको बैठक विथोलिएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको फोनपछि राजधानीकै एक पाँचतारे होटलमा भइरहेको बैंक अध्यक्षहरुको छलफल विथोलिएको हो । बैठकमा अधिकांश बैंकका अध्यक्ष र केही बैंकका सञ्चालक सहभागी थिए । बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई ब्रिफिङ […]
२ अर्ब ५३ करोडको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
गाउँले न्यूज, २८ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त परिमाणको ट्रेजरी मंगलबार जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि मात्रै २ अर्ब ५३ करोडको ट्रेजरी जारी गर्न लागिएको जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आज […]
अर्थतन्त्रमा ज्वरो आएको छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं-२६ मंसिर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ज्वरो आएको बताएका छन् । अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा ज्वरो आएको तर त्यो बच्चाको दात आउँदा आएको ज्वराे भएका कारण असर खासै नगर्ने बताए । सेयर बजारमा विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा बाेल्दै उनले सेयर बजारमा भएको पुँजीलाई परिचालन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सके […]
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल आयल निगमले लामो समयपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमले सोमबार मध्य रातिबाट लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतकाअनुसार कायम भएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर एक सय ११२ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेललाई ९९ रुपैयाँ कायम भएको […]
आईपीओ जारी गर्दै नयाँ लघुवित्त
काठमाडौं, १४ मंसिर – पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम आईपीओ जारी गर्न थालेका छन् । अघिल्लो साता सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर जारी गरेको थियो । सामुदायिको आईपीओ बाँडफाँट भएको दुई साता पनि पुग्न नपाउँदै चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी १९ गतेदेखि साधारण सेयर जारी गर्दैछ । चौतारी पछि […]